Farmaajo oo u ambabaxay Uganda | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo u ambabaxay Uganda
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa u ambabaxay waddanka Uganda halkaasoo uu uga qeyb gali doono xafladda Caleema saarka madaxweyne Yuweri Musafani.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee Farmaajo ayaa goor dhaw u ambabaxay Magaalada Kambaala ee xarunta waddanka Uganda isagoo halkaas kaga qayb gelaya xafladda caleema-saarka Madaxweyne Yoweri Museveni, sida ay hore u qortay Keydmedia Online.
Madaxweyne Farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay Dalka Uganda waxa uu kulamo gaar-gaar ah la yeelan doonaa Madaxda kale ee ka soo qayb gelaysa munaasabaddan, isaga oo kala hadli doona danaha wadajirka ah ee kala dhexeeya dalkeenna.
Wasiirka Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Jamaal Maxamed Xasan, Marwada Koowaad ee dalka Marwo Seynab Cabdi Macallim, Lataliyeyaasha Madaxweynaha iyo Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada soomaaliya ayaa la seegay in ay qeyb ka yihiin safarka.
Waddanka waxa uu kamid yahay waddamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ee loo yaqaan AMISOM, waxaana lagu tiriyaa Uganda in ay kamid tahay saaxiibada Soomaaliya.